Izici Ezibalulekile Zekhasi Lasekhaya eli-12 | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 29, 2012 ULwesibili, May 3, 2016 Douglas Karr
UHubspot ungumholi ekushayeleni okuqukethwe ukushayela isu lokukhangisa elingenayo, angikaze ngibone inkampani eyodwa ikhipha amaphepha amhlophe amaningi kangaka, amademo kanye nama-ebook. I-Hubspot manje ihambisa ifayela le- infographic ezintweni eziyi-12 ezibucayi zekhasi eliyisiqalo.
Ikhasi eliyisiqalo lidinga ukugqoka izigqoko eziningi futhi likhonze izethameli eziningi ezivela ezindaweni eziningi ezahlukene. Akufani nekhasi lokuzinikela elizinikele, lapho ithrafikhi evela esiteshini esithile kufanele inikezwe umlayezo othize wokuthatha isenzo esithile. Amakhasi okufika anezinga eliphezulu lokuguqulwa ngoba aqondisiwe futhi ahambelana kakhulu nesivakashi.
Sisiza amaklayenti ethu ekwakheni amasu wokumaketha angenayo… futhi kufanele ngisho ukuthi ngiyacabanga I-Hubspot uphuthelwe umaki kule infographic… kunezinto ezibaluleke kakhulu namasu aphuthelwe kule infographic:
Ulwazi lokuxhumana - Ukubizelwa esenzweni izingcezu zolwazi ezibalulekile, kepha hhayi wonke umuntu ufuna ukuchofoza kudemo noma izinsizakusebenza ezingeziwe. Kwesinye isikhathi ikhasimende lakho likulungele ukuthenga futhi limane lidinge i- inombolo yocingo or ifomu lokubhalisa ukuze uqale.
Izithombe zezenhlalo - ukubaluleka kwezinkundla zokuxhumana ekukhuliseni iklayenti akukwazi ukubukelwa phansi. Kwesinye isikhathi abantu bazongena kusayithi lakho, kepha bamane abakakulungeli ukuthenga okwamanje… ngakho-ke bazokulandela ku-Facebook, ku-Google + noma ku-Twitter ukuze bakwazi kangcono.
Ukubhaliswa Kwamaphephandaba - mhlawumbe into ebukelwa phansi kakhulu yanoma iliphi ikhasi eliyisiqalo ukubhaliswa kwezindaba. Ukuhlinzeka ngezindlela zethemba lokufaka ikheli labo le-imeyili futhi ziphindaphindwe uthintwe ngezindaba, okunikezwayo nolwazi oluvela kumkhiqizo wakho alunanani. Ukuthwebula ikheli le-imeyili kubaluleke kakhulu - qiniseka ukuthi kulula futhi kusobala ekhasini lakho eliyisiqalo.
Ngingaphikisana nokusebenzisa leli gama izici naku- # 5 futhi. Kufakazelwe kaninginingi ukuthi abasebenzisi baningi uhehe izinzuzo kunezici. Ukukhuluma ngokubika kwakho okusha okufingqiwe akubalulekile… kepha ukukhombisa idatha oyenzayo ongayethula ukuze inkampani ikwazi ukwenza imali!
Okokugcina, ikhasi lakho eliyisiqalo kufanele lenzelwe amagama angukhiye azokhomba isiza sakho ngokufanele futhi aqinisekise ukuthi isayithi lakho litholakala njengoba likhula ekuthandeni. I-SEO kufanele njalo ibambe iqhaza ekwakhiweni nasekuthuthukisweni kwekhasi lakho eliyisiqalo.
Tags: izakhi zekhasi eliyisiqaloukwakheka kwekhasi eliyisiqaloizakhi zekhasi eliyisiqaloindlelaindawo
Inkulumo Yamahhala Ayilivikeli Idumela Lakho
Jan 30, 2012 ku-4: 54 AM
Kuyiqiniso! futhi ezinsukwini ezimbili nje emuva bathole isibuyekezo esivela ku-Google maqondana nokubaluleka kwamakhasi okufika. Ngakho-ke uma othile eqhuba umkhankaso wokusebenzisa ngaphandle kwekhasi, Kubalulekile ukuba nohlu olufanele lwamagama asemqoka kanye nekhasi elifanele lapho lawo magama angukhiye azosiyisa khona ..
Jan 31, 2012 ngo-12: 56 PM
Siyabonga ngokwabelana ngobuchwepheshe bakho. Ngisekela iphuzu lakho entweni yokubhaliselwa kwencwajana! Kuyangimangaza ukuthi kufanele ngimbe kanjani ukuthola izikhokhelo ezinkampanini engifuna ukuzwa kuzo.
Jan 31, 2012 ngo-5: 18 PM
Ngiyavuma ukuthi enye yezinto ezinkulu ezingekho kuleli khasi yizithonjana zenhlalo. Ngikholwa ukuthi kufanele kube namaqoqo amabili wezithonjana zemidiya yokuxhumana ekhasini ngalinye — eyodwa eyeyenkampani, eyomkhiqizo noma yewebusayithi iyonke nenye yekhasi elithile noma i-athikili umsebenzisi ayivakashelayo.